Sarivongan'ny Nosin'ny Paka, Moai - Nosin'ny Paska
Amerika Atsimo Shily Nosin'ny Paska
Adiresy: Nosin'i Paska, Chilie;
Natao teo anelanelan'ny 1250 sy 1500;
Isam-ponina isa: 887;
Mahatratra lanjany: latsaky ny 5 taonina;
Fiaviana avo lenta: 3-5 m.
Iray amin'ireo zava-mahatalanjona eto amin'izao tontolo izao, sarin'ny moai, dia ao amin'ny Nosin'ny Paka , any amin'ny faritra afovoan'ny Oseana Pasifika. An'i Shily ny nosy, nahazo ny anarany izany, satria nosokafana ny mpandahateny nasionalista nasionalin'ny Paska alahady. Ankoatra ny sarivongana, dia tonga ny mpizaha tany tonga any an-tanimbolin'ny tany, volkano volkano, tora-pasika misy rano manga madio.
Moai - famaritana sy zava-misy mahaliana
Nahita ireo sarivongana tany amin'ny nosin'i Paska ny olona rehetra - tsy dia lehibe loatra ny sarin'ireo tsangambatom-po, nefa tsy afaka mamorona aingam-panahy feno izy ireo, ka amin'ny fotoana voalohany dia tokony hitsidika ny nosy ianao ary hijery azy ireo velona.
Firy ny sarivongana ao amin'ny Nosin'ny Paka? Noho ny fikarohana momba ny fikarohana ambanin'ny tany, dia efa nisy sarivongana 887 teo ho eo. Ireo vato goavam-be misy loha lehibe sy vatana tsy misy fotony dia niparitaka manerana ny nosy.
Inona ireo sarivongana ao amin'ny Nosin'ny Paka? Ny mponina ao an-toerana dia miantso azy moai, manome azy ireo hery manokana ary mino fa ny tanimanga dia hery ara-panahy ao amin'ilay nosy. Noho ny fiorenan'ny toetr'andro tsara, ny fahombiazana amin'ny fitiavana sy ny ady, ny famokarana harena be dia be. Matetika ianao no maheno fa ny sarivongana vato ao amin'ny nosy Pakao dia misafidy ny toerana fametrahana. Mana, ilay antsoina hoe hery mihoatra ny natiora, manaingo ny sarivongana, Manainga ny toerana misy azy.
Inona ireo tsangambato natao teo amin'ny nosy Paska? Ny endriny dia manomboka amin'ny taonjato faha-13 ka hatramin'ny 16 taona. Ny tena moai dia vita avy amin'ny volkano vulkan, izay mora azo, ary ampahany kely - avy amin'ny trachyte na basalt. Ary koa, misy sarivongana iray tena mendrika ny mponina ao an-toerana - Hoa-Haka-Nan-Ya, izay vita avy amin'ny mujierite an'ny volkano Rano Kao.
Taiza avy ireo sarivongana nipoitra tao amin'ny Nosin'ny Paka? Mazava ho azy fa nila fotoana sy ezaka ny fanorenana azy ireo. Voalohany, nisy ny angano momba ny mpitarika ny clan Hotu Matu, izay nahita voalohany ilay nosy ary niorina tao. Tamin'ny taona 1955-1956 ihany no nazava ny fahamarinana, izany no nitranga rehefa nizaha ny nosin'i Easter , ilay mpikaroka malaza Norvey Thor Heyerdahl - sarivongana, izay niavian'ny sain'ny mpahay siansa rehetra, izay natsangan'ny foko "mihantona lava". Ny anarana mahagaga toy izany dia miseho noho ireo kavina lava izay voaravaka amin'ny kavina mavesatra. Koa satria ny tsiambaratelon'ny fanatsarana ny moai dia nafenina moramora tamin'ny mponina indizeny, nanambara azy ireo ny toetra mahagaga.
Araka ny fanazavan'ireo mpizaha tany ireo solontena velona sisa velona tamin'ny foko "nihaino tsara", ireo tsangambato moai dia noforonin'ny razambeny. Izy ireo ihany no mahafantatra ny fizotry ny famokarana amin'ny teoria. Saingy navotsotra ny fangatahan'ny Tour Heyerdahl, ny solontenan'ny fokonolona dia nanoratra ny sarivongana tamin'ny tranombakoka vato, nanosika azy ireo tany amin'ny toerana iray, ary nanangana sombin-kazo telo, nametraka vato teo ambanin'ny fotony. Nalefa am-bava nanomboka tamin'ny taranaka nifandimby ny teknolojia, nanomboka tamin'ny ankizy tany am-boalohany dia nihaino ny tantaran'ny olon-dehibe ary namerina ny zavatra tsaroany. Izany dia nitohy mandra-pahaizan'ireo ankizy ny dingana manontolo.
Tsaho momba ny sampy vato ratsy
Ny sarivongana moai ao amin'ny Nosin'ny Paka dia voaheloka ho fongana ny mponina ao an-toerana. Raha mino vondrona mpahay siansa iray ianao, dia nitarika ny fandringanana ny ala ny fananganana tsangambato, satria nentina tamin'ny rindrina hazo izy ireo. Noho izany dia nihena ny loharanon'ny sakafo ary vetivety dia nisy mosary. Izany dia nahatonga ny famongorana tanteraka ny mponina ao an-toerana. Ny vondrona mpahay siansa iray hafa dia milaza fa ny voalavo polineziana dia nanjary antony nahatonga ny fanjavonan'ny hazo. Ny sarivongana maoderina dia efa naverina tamin'ny taonjato faha-20, satria ny horohoron-tany sy ny tsunami dia nanimba azy ireny. Trangan-javatra vitsy monja no namoy ny ainy, napetraky ny Rapanui fahiny.
Tamin'ny voalohany, ny vato moai dia hita ho endrika mistery napetrak'ireo nosy Pakistane. Koa satria tsy nandao ny fiezahana hahatakatra ny tanjon'ny sampy ireo arkeology dia nanomboka ny fikarohana. Vokatr'izany, rehefa nipoitra ireo sarivongana ao amin'ny Nosin'ny Paka dia nahita fa ny lohan-dalam-be dia ny vatany, ny totalin'ny vatana dia eo amin'ny 7 m. Ny faran'ny kely indrindra amin'ireo moai tena mahagaga indrindra dia nalevina teo an-tsoroka, izay namitaka ny vahoaka lohany. Ankehitriny dia hitan'izao tontolo izao fa hitany teo ambanin'ny sarivongana ao amin'ny nosin'ny Paska izy ireo, nihanitombo ny fitomboan'ireo mpizahatany, izay tena faly amin'ny mponina, satria ny fizahantany no loharanon'ny fidiram-bola ho an'ny nosy.
Ny vohitra Orongo
Minisitry ny seranan'i Pistarini
30 tsara indrindra sy ratsy indrindra ny akanjo principaux Disney
Vavaka ho an'ny fitiavana
Marika amin'ny alahady palma mba hanambady
Ny maso dia manidina Allergodyl
Ny barrage bevohoka Bar Rafaeli amin'ny dokambarotra bikini
Ny lakozia dia manolo-tanana
Vitamina ho an'ny volo sy ny fantsika
Okroshka amin'ny yogourt - recipe iray ho an'ny fahaverezan'ny lanja
Stitches avy amin'ny akanjo
Sakafo ao anaty saosy
Ahoana no handrafetan'ny tongotra tongolo ao amin'ny lafaoro?
Ahoana no hanesorana tasy amin'ny mulberry?